Shabakadda Wararka Amiirnuur – Page 2 – Xog Xaqiiqda Ku Saleysan
Kenya : Guusha Kenyata oo si rasmi ah loo shaaciyay.
Guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada kama dambeysta ah ee kasoo baxday doorashadii laga qabtay Talaadadii lasoo dhaafay. Guddiga ayaa sheegay in Uhura Kenyata uu marale ku guuleystay xilka Madaxtinimada ee dalka Kenya, isagoona dalkaasi maamuli doona Shanta sano ee soo socota. Xisbiga Mucaaradka […]
Daawo : Muxaadarada ” Cibaadu-Raxmaan” ee uu jeediyay Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil.
Waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa Muxaadaro Cinwaankeedu uu yahay ” Cibaadu-Raxmaan” oo muddo ka hor uu jeediyay Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil Haaruun oo ka mid ah Culimada Soomaaliyeed kuwa loogu jecel yahay. Xigasho : Sheekh Mustafe Official Channel
Baarlamaanka oo Ansixiyay Sharci Halis Ku Ah Shirkadaha Isgaarsiinta Ee Muqdisho. (Warbixin)
Baarlamaanka oo ah hey’adda dowladda u qaabilsan xalaaleynta iyo xaaraantinimeynta ayaa maalintii shalay ansixiyay sharciga Isgaarsiinta oo uu muddo badan muran ka taagnaa. Sharcigan oo uu horgeeyey wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Cabdi Canshuur ayaa waxaa u codeeyey 158 xildhibaan, hal xildhibaana waa uu diidey sida uu sheegey guddoomiye ku xigeenka […]
Nin Yahuudi ah oo Gaari jiirsiiyay Carruur Filastiiniyiin ah. (Sawirro)
Nin Yahuudi ah ayaa Xaafadda Salwaan ee magaalada Al-Qudus Gaari ku jiirsiiyay Afar Caruur ah oo Filastiiniyiin ah, isagoona dhaawac halis u ah u geystay qaar ka tirsan Caruurtaasi. Ninka Weerarkaas geystay ayaa markii dambe goobta ka baxsaday, isagoona ka cararay gaarigii uu watay sida ay ku warrameen Booliiska Yahuudda.
Shacabka Kenya oo u dareeray Sanaadiiqda Codbixinta.
Dadweynaha reer Kenya ayaa saakay ku kalahay Xarumaha Codbixinta si ay usoo doortaan Madaxweyne cusub oo dalkaasi uu yeesho. Dadku waxay sidoo kale soo dooran doonaan Xildhibaannada Baarlamaanka, Senatarrada Golaha sare, Gudoomiyeyaasha gobollada, iyo kuwa degmooyinka. Kormeerayaal ka socda Qaramada Midoobey, Midowga Afrika iyo Ururka Midowga Yurub ayaa ku sugan […]
Muqdisho : Shacab Gadooday oo la wareegay Gaari ay Amisom leeyihiin. [Video]
Dibadbax ay rabshado hareeyeen ayaa maalintii shalay ka dhacay qeybo ka tirsan magaalada Muqdiso ee dalka Soomaaliya. Dhallinyarada ka shaqeysta Mootooyinka loo yaqaano ” Bajaajta” ayaa isugu soo baxay Waddada Makka Al-Mukarama, kuwaas oo ka cabanayay xirnaashaha qaar ka tirsan Waddooyinka magaalada Muqdisho. Intii banaanbaxyadu socdeen, waxay dadweynu la wareegeen […]
Sawirro : Difaacyadii Amisom ee Leego.
Ciidamada Uganda ee qeybta ka ah Shisheeyaha ku sugan dalka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor ka guuray Saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka Leego ee Gobolka Shabeellaha hoose. Wariyeyaal ka tirsan Idaacadda ku hadasha Afka Xarakada Alshabaab ee Al-Andalus ayaa tagay deegaankaasi, iyagoona Sawirro kasoo qaaday Xeridii ay ka guureen Ciidamada […]
Culimada ‘Somaliland’ oo War kasoo saaray Kaniisadda Hargeysa. [Video]
Kulan ay magaalada Hargeysa kuyeesheen qaar ka tirsan Culimada Soomaaliyeed ee ku nool gobollada Waqooyi ayaa Bayaan waxay soo saareen Kaniisadda Hargeysa laga furay. Culimada ayaa kasoo horjeestay tallaabta ay Dowladda ku ogolaatay in dib loo furay Kaniisadda, iyagoona soo bandhigay waxa ay Shareecadu ka qabto in Kaniisad ay Gaaladu […]
15 Mareykan ah oo lagu dilay Afghanistan.
Khasaare xooggan ayaa Ciidamada Dowladda Saliibiyada ee Mareykanka kasoo gaaray weerar Istish-haadi ah oo duhurnimadii shalay ka dhacay magaalada Qandahaar ee Dalka Afghanistan. Sida lagu sheegay Bayaan kasoo baxay Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan, mid ka mid ah Ciidamada Guutada Istish-haadiyiinta ee Imaarada oo lagu magacaabo ” Asadullaah Qandahaari” oo […]
Mandheera : Askar la dilay iyo Gawaari la gubay.
Weerar gaadmo ah ayaa habeenkii xalay lagu qaaday Saldhig ay Ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo Lafeey oo ku dhow degmada Mandheere ee ka tirsan Gobolka Waqooyi bari ee ay gumeysato Dowladda Kenya. Xoogag ka tirsan Xarakada Alshabaab ayaa qaaday weerarkaasi, iyagoona beegsaday Saldhig ay halkaas ku leeyihiin Ciidamada […]